ကျွန်စနစ်အတွက်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုတောင်းဆိုသင့်ပါသလား။ - Afrikhepri ဖောင်ဒေးရှင်း
Eပြီးခဲ့သည့်ဇန်န ၀ ါရီလက Guadeloupe ကျေးကျွန်မျိုးနွယ်ဖြစ်သော Rosita Destival သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ Black Association မှကိုယ်စားလှယ်ကောင်စီ (CRAN) ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံအားတရားစီရင်ရန်နှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်မှုများအတွက်လျော်ကြေးတောင်းခံရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ပ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကျွန်စနစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည့်“ Taubira Law” ဟု ၂၀၀၁ မေလ ၂၁ ရက် ၂၀၀၁-၄၃၄ ဥပဒေအမှတ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
ကျွန်တော်ဖျက်သိမ်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်နေ့ (Taubira ဥပဒေကိုအထက်လွှတ်တော်မှ ၂၀၀၁၊ မေလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၀၁ တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်) တွင်မေလ ၁၀ ရက်တွင် CRAN ကကဲဆိတ်ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ၁၉ ရာစုတွင်ဟေတီနိုင်ငံ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခဲ့ခြင်းအတွက်လူသားအားလုံးအပေါ်ဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုများဖြစ်သောကျွန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကျွန်စနစ်များအတွက်လျော်ကြေးငွေတောင်းခံရန်သိုလှောင်ထားရာများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကတောင်းဆိုခဲ့သည်။
ကျွန်စနစ်ကို ၁၈၄၈ ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်၌လုံးဝဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ဖျက်သိမ်းပြီးနောက် ၁၆၅ နှစ်အကြာတွင်တရားရေးဆိုင်ရာအရေးယူမှုများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်မှာအံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုနှင့်ကျွန်စနစ်သည်လူသားတို့ကိုဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုများဖြစ်သည်ဟုပြင်သစ်ဥပဒေက ၂၀၀၁ ခုနှစ်အထိမှအသိအမှတ်ပြုခြင်းကမိုက်မဲမှုမဟုတ်ပေလော။
၂၀၀၁ ခုနှစ်မေလဥပဒေသည်ရှေ့သို့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ငြင်း။ မရနိုင်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ထိုနေရာတွင်ရပ်သင့်သလော
နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်တန်းခဲ့သော "ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း" ၏မေးခွန်းသည်သဘောထားကွဲလွဲမှုအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အဆိုပြုထားသော Taubira ဥပဒေတွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာပုဒ်မပါ ၀ င်သည့်ပုဒ်မ ၅ ပါ ၀ င်သည်။ “ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ဤရာဇ ၀ တ်မှုကြောင့်ပြန်လည်လျော်ကြေးအခြေအနေများကိုစစ်ဆေးရန်တာ ၀ န်ရှိသောအရည်အချင်းပြည့်မီသောကော်မတီတစ်ခု” ကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ဥပဒေကော်မတီတွင်ဖျက်သိမ်းလိုက်သောကြောင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အပိုင်းကိုပယ်ဖျက်ပြီးမှသာလွှတ်တော်ကတညီတညွတ်တည်းအတည်ပြုခဲ့သည်။1].
နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့ဤဧရိယာ၌ယူလုပ်ရပ်များနေသော်လည်းပြုပြင်တောင်းဆိုမှုများဖို့တုံ့ပြန်မှုနည်းနည်းပြောင်းလဲသွားတယ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးအငြင်းအခုန်ဤပြဿနာအပေါ်ကြားဝင်လိုလားသော CRAN, ဥပဒေရေးရာအရေးယူဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
ဥပဒေအရလျော်ကြေးငွေကို“ ကြီးမားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်၎င်းမှဆင်းသက်လာသူများအနေဖြင့်တစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေ၊ စုပေါင်း၍ ဖြစ်စေလျော်ကြေးပေးရန်အတွက်တရားဝင်၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ပစ္စည်း၊ ယဉ်ကျေးမှုသို့မဟုတ်သင်္ကေတဆိုင်ရာကိရိယာများ” ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။2] ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရအကြီးအကျယ်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ရပ်များအတွက်လျော်ကြေးပေးခြင်း - လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှု၊ ထို့ကြောင့်ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်ပြင်သစ်သည်ဂျာမနီမှစစ်ပျက်စီးမှုများအတွက်လျော်ကြေးငွေများရရှိခဲ့သည်။
Louis-Georg Tin  CRAN ၏ဥက္ကpresident္ဌသည်ကျွန်စနစ်နှင့်ဆက်စပ်သောလျော်ကြေးငွေများသည်အလွန်ဟောင်းသောအချက်နှင့်ဆက်စပ်နေခြင်းကြောင့်မလိုအပ်သောအယူအဆကိုဆန့်ကျင်သည်။4] ။ ပြင်သစ်နှင့်နိုင်ငံတကာဥပဒေများအရလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဥပဒေအမှတ် 64-1326 အဆိုပါ 26 ဒီဇင်ဘာလ 1964လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုများသည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်မှုအဓိပ္ပာယ်ကိုမှတ်သားထားခြင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃၊ ၁၉၄၆ ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်မှုများ၊ ၁၉၄၅၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံရုံး၏ပchartိညာဉ်စာတမ်းပါအတိုင်းသူတို့သည်သူတို့၏သဘောသဘာဝအားဖြင့်အတိအလင်းဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ "
ထို့ကြောင့် ၁၆၅ နှစ်အကြာလျော်ကြေးတောင်းခံခြင်းသည်တရားဝင်ရှုထောင့်အရပြaနာမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် LG Tin ကလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်မှု၏မဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ကြီးမားသောကြောင့်လူအများအပြားအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်ပြီးတိုင်ကြားချက်ကိုတင်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်။ မျိုးဆက်များစွာကြာတတ်သည်။ ဤရွေ့ကား, ကျွန်စနစ်အဘို့အမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈၄၈ ခုနှစ်တွင်ဖျက်သိမ်းပြီးနောက်စိုက်ခင်းများတွင်အလုပ်လုပ်သောလွတ်လပ်သူများ၏ဘဝသည်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ သူတို့ကိုငွေရေးကြေးရေးအရအသုံးချခွင့်မရခြင်းတို့ကြောင့်သူတို့သည် ဆက်လက်၍ ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆင်းရဲသောလုပ်ခအတွက်ယခင်ဆရာများအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဝိရောဓိအရဆိုရလျှင် ၁၈၄၉ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ပိုင်ရှင်များအားသူတို့၏“ အလုပ်လုပ်သောကိရိယာ” ဆုံးရှုံးမှုအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်လျော်ကြေးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာလျော်ကြေးငွေကိုလက်ခံရရှိသူကို slavers ခဲ့ ... ! ယခင်ကျေးကျွန်များအတွက်“ လွတ်မြောက်” ခြင်းသည်လုံလောက်ခဲ့သည်။
မေလ 23 1848 အပေါ်မာတီနစ်အတွက်ကျွန်ခံနေရာဖျက်သိမ်း
ပြင်သစ်တွင်အနည်းငယ်သာဆွေးနွေးခဲ့သောဤအကြောင်းအရာသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်တွင်ဆွေးနွေးမှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်မှစက်တင်ဘာ ၈ ရက်အထိဒါဘန် (တောင်အာဖရိက) တွင်ကျင်းပခဲ့သောကုလသမဂ္ဂမှတတိယအကြိမ်ကမ္ဘာ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆိုင်ရာညီလာခံတွင်နိုင်ငံများကကျွန်စနစ်နှင့်လူကုန်ကူးခြင်းများကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့်အရောင်းအဝယ်ပြုမှုသည်ကျေးကျွန်များသည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်မှုများဖြစ်သည်” ၎င်းတို့သည်“ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ လူမှုဆန့်ကျင်ရေးဝါဒနှင့်သည်းမခံခြင်းတို့၏အဓိကအရင်းအမြစ်များနှင့်ထင်ရှားပြသမှုများ” နှင့်“ ဤလုပ်ရပ်များ၏သားကောင်များသည်အကျိုးဆက်များကိုဆက်လက်ခံစားနေရသည်” ဖြစ်သည်။
အဲဒီမှာလူမျိုးရေးစိတ်ဓာတ်, လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှု, လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုနှင့်ဆက်စပ်ဟဿဖြစ်မည်ကိုဒေသခံများဆန့်ကျင်ကမ္ဘာ့ဖလားညီလာခံ။ ဒါဗန် (တောင်အာဖရိက)
သြဂုတ် ၃၁ - စက်တင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၁
အပိုဒ် 13 ။
ကျွန်စနစ်နှင့်ကျွန်ကုန်သွယ်ရေးအထူးသဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကုန်သွယ်မှုသည်လူသားတို့၏သမိုင်းတွင်အလွန်ဆိုးရွားလှသည့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြောင့်သာမကသူတို့၏အကြီးစား၊ စနစ်တကျနှင့်အထူးသဖြင့်သားကောင်များ၏အနှစ်သာရကို၏ငြင်းပယ်; ကျွန်ပ်နှင့်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုသည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကျွန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အမြဲတမ်းဖြစ်သင့်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၏အဓိကအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသောသည်းမခံမှုများနှင့်အာဖရိကသားများနှင့်အာဖရိကနွယ်ဖွားသားများအပြင်အာရှနွယ်ဖွားများနှင့်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများသည်ဤလုပ်ရပ်များနှင့် \_ t အကျိုးဆက်များကိုဆက်လက်ခံစားရမည်။
သို့သော်အာဖရိကနိုင်ငံအတော်များများပြုပြင်ရေးကျွန်စနစ်ပါဝင်ပတ်သက်တိတ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေမေတ္တာရပ်ခံသောအခါ, ဥရောပပြည်နယ်များဤတောင်းဆိုမှုကိုဆန့်ကျင်ကြ ...
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်လျော်ကြေးငွေပေးရေးကိစ္စကိုအကြိမ်များစွာမေးခဲ့ဖူးတယ်။ ၁၈၆၅ မှာကျွန်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးကာလမှာ၊ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေကြမ်းတွေတင်သွင်းခဲ့ပေမယ့်သမ္မတအင်ဒရူးဂျွန်ဆင် (တောင်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကလိုလားသူ) လင်ကွန်းနေရာတွင်သူလုပ်ကြံခံရပြီးနောက်အစားထိုးခဲ့သောသူသည်၎င်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။2] ။ ထိုအချိန်မှစ. မြောက်မြားစွာလုပ်ရပ်များကျေးကျွန်၏သားစဉ်မြေးဆက်များအတွက်လျော်ကြေးငွေရရှိရန်ခေါ်ဆောင်သွားပြီ။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်လုပ်ရပ်များ, တစ်ဦးချင်း, လျော်ကြေးခဲ့သည်။
မာတင်လူသာကင်းကကျွန်စနစ်နှင့်လျော်ကြေးငွေပေးရေးအတွက် "ကျွန်စနစ်သည်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်လုပ်ခလစာများဆုံးရှုံးခြင်းနှစ်ခုလုံးဖြစ်သည်"1] ။ ကျွန်များသည်သူတို့၏သားစဉ်မြေးဆက်များကိုကံကြမ္မာအမွေပေးနိုင်ခဲ့သော်လည်းကျွန်များသည်သူတို့၏စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုသာအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ ရာစုနှစ်များအတွင်းအမေရိကရှိလူမည်းများခံစားခဲ့ရသောအမြတ်ထုတ်မှုနှင့်အရှက်ခွဲမှုများကိုလျော်ကြေးပေးရန်အတွက်မည်မျှပင်ကြီးမားသောရွှေတံတားမျှလုံလုံလောက်လောက်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဤ“ လုပ်ခနှောင့်နှေးခြင်း” ၏စျေးနှုန်းကိုမူသတ်မှတ်နိုင် ... ခံစားခဲ့ရသည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်လျော်ကြေးပေးခြင်းသည်လျော်ကြေးပေးခြင်းဆိုင်ရာအစီအမံများချမှတ်သည့်အစိုးရ၏ကျယ်ပြန့်သောအစီအစဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ "
မကြာသေးမီကဒီမိုကရက်တစ်အမတ်ဂျွန် Conyers မှ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးတင်သွင်းသောဥပဒေမူကြမ်းသည်ကျွန်စနစ်ကြောင့်အာဖရိကန်အမေရိကန်များအပေါ်လူမျိုးရေးနှင့်စီးပွားရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ကော်မရှင်တစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ယနေ့သူတို့၏ဘဝများ၌ကျွန်စနစ်နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများ၊ လျော်ကြေးပေးခြင်း၏တရားဝင်မှု၊ ပမာဏနှင့်ရထိုက်ခွင့်အခြေအနေများ။1] ။ 1989 ကတည်းကမှန်မှန် redeposited ဤပညတ်တရားကို, ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဂျေ Conyers ၏အဆိုပြုချက်ကိုအရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကပုံမှန်သက်တမ်းတိုးဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏အရည်အချင်းကိုရှိပါတယ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီနှင့်စပ်လျဉ်း, ကျွန်စနစ်နှင့်ပတ်သက်။ င့်လင်းမြင်သာဥပဒေကိုကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ 2000 ခုနှစ်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်  ။ ဤပညတ်တရားကိုအာမခံကုမ္ပဏီများသည်သူတို့ကျွန်ကုန်သွယ်မှုကနေအတိတ်ကာလအကြိုးခံစားဖူးခြင်းရှိမရှိထုတ်ဖေါ်ဖို့ပြည်နယ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါသုတေသနများရှိကုမ္ပဏီများကကျေးကျွန်ဒဏ်ရာရသို့မဟုတ်သေဆုံးခဲ့သည်အဖြစ်သူတို့ခံစားခဲ့ရဆုံးရှုံးမှုသေချာစေရန်ကျွန်မှအာမခံ-အဖုံးများရောင်းချခဲ့ဖူးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်စနစ်ကနေအမြတ်အစွန်းကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
အောက်ပါအနှစ်အလားတူဥပဒေကြမ်းများဖက်ဒရယ်ဥပဒဖြစ်လာခြင်းမရှိဘဲအခြားပြည်နယ်များသို့မဟုတ်အမေရိကန်မြို့ကြီးများအတွက်လွန်ခဲ့ကြသည်။ 2005 ခုနှစ်, ချီကာဂိုမှာရှိတဲ့ပညတ္တိကျမ်းတွင်အောက်ပါကုမ္ပဏီက JP Morgan Chase, တစ်ဦးဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်များ, ကအစပြုရာနှစ်ခု Louisiana ဘဏ်များ, 1830 နှင့် 1865 အကြားကျေးကျွန်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကွောငျးဝန်ခံရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ စိုက်ခင်းပိုင်ရှင်တွေက default အတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည့်အခါချေးငွေထုတ်ပေးသည့်အခါတစ်ဦးသိုက်အဖြစ်လက်ခံထားကြောင်းအစေခံကျွန်, ဘဏ်ကျေးကျွန်၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒီနောက်တွင် JP Morgan Chase ဝီဇီယားနားထဲမှာအာဖရိကန်အမေရိကန်လူငယ်များအတွက်ပညာသင်ဆုပါဝင်သည်ဟုတစ်5သန်းပြုပြင်အစီအစဉ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ အလားတူပင်အများအပြားအမေရိကန်ဘဏ်များ (အမေရိက၏ဘဏ်, Wachovia ကော်ပိုရေးရှင်း, Lehman Brothers ... ), အတိတ်တွင်ကျွန်စနစ်ကနေအကျိုးဘဲလျက်ပြစ်မှုထင်ရှား, လျော်ကြေးအစီအစဉ်များကိုဖွင့်ထားပြီ။
ဟေတီသည်ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုကြွယ်ဝပြည့်စုံမှုအတွက် CRAN သည် Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ကိုအဘယ်ကြောင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်ကိုနားလည်ရန်သမိုင်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်တစ်ခုလိုအပ်သည်။5].
1776 ခုနှစ်တွင်စန်တိုဒိုမင်ဂိုကျွန်းအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု, အရှေ့ပိုငျး, ပြင်သစ်ကိုလိုနီများနှင့်ပိုမိုကြီးမားပေမယ့်ဒီထက်လူဦးရေအနောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, စပိနျအပိုင်သို့ကွဲကွာခဲ့သည်။ အလယ်မှာ 18e ရာစုပြင်သစ် Saint-Domingue, ဥရောပကော်ဖီ, သကြား, မဲနယ်နှင့်ဝါဂွမ်းမှအကြီးဆုံးတင်ပို့ဘို့ကြီးသောချမ်းသာကြွယ်တဲ့ကာလဖြစ်ခဲ့သည်။ စိုက်ခင်းများတွင်အထူးသဖြင့်ပြင်းထန်သောဖိနှိပ်မှုမှဘာသာရပ်ကျွန်အလုပ်သမား, စည်းစိမ်ဥစ္စာများစုစည်းနေခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။
၁၇၈၉ ခုနှစ်တွင် Santo Domingo ၏ပြင်သစ်တွင်“ Grands Blancs”၊ စိုက်ခင်းပိုင်ရှင်များနှင့်“ Little Whites”၊ ဓနအင်အားကြီးသူရဲကောင်းများနှင့်မြို့သူမြို့သားများ၊ မူလာတ် ၂၅၀၀၀ သို့မဟုတ်လူမည်းကျွန်နှင့်လူမည်းကျွန် ၄၀၀,၀၀၀ တွင်လူ ၂၅၀၀၀ ဝန်းကျင်အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးသည်ကျွန်းပေါ်တွင်အကြီးအကျယ်ဆူပူအုံကြွမှုများဖြစ်စေခဲ့သည်။ မင်းသားနှင့်မဟာမိတ်ပြုထားသောကြီးမားသောမြေပိုင်ရှင်များ၏ဆန့်ကျင်မှု၊ “ လူဖြူအနည်းငယ်” နှင့်“ အရောင်ကင်းမဲ့” ၏သာတူညီမျှတောင်းဆိုမှုများ၊ ၎င်းသည် ၁၇၉၁ ခုနှစ်မှအင်္ဂလိပ်နှင့်စပိန်စစ်တပ်များ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့် Toussaint Louverture ၏အာဏာရလာခြင်းနှင့်အတူ ၁၇၁၁ မှအလွန်လွတ်လပ်သောလွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
•အဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်း 1793 နှင့် 1794 အတွက်တန်းတူသောနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများအတွက်လူမည်းဖို့လွတ်လပ်မှုကိုပေးထားတယ်။
•ဇူလိုင်လ 1795 အတွက်ဘေဆယ်၏စာချုပ်ပြင်သစ်မှစန်တိုဒိုမင်ဂို၏စပိန်တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုပြန်ပေးသည်။
• Toussaint Louverture 1801 အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဘဝကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ကစန်တိုဒိုမင်ဂိုအတွက်တပ်များအကြီးအကဲအတွက်တပ်မှူးခန့်အပ်ခဲ့သည်။
• Bonaparte သူ 25.000 အတွက်ခံတပ် Joux မှာကွယ်လွန်သွားရှိရာပြင်သစ်တွင်ပေးပို့ခြင်းမပြုမီအထွေထွေ Leclerc ဖွငျ့မှာထားတျောမူတစ်စင်းကိုနှင့် 1802 ယောက်ျားပေးပို့ခြင်းတစ်ဦးမှာကင်းထိုး Toussaint Louverture ဆွဲဆောင်, ကျွန်း reconquer လိုသောနှင့် 1803 အတွက်ဖမ်းမိ ။
• Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture ၏လက်ထောက်ကဦးဆောင်သည့်ပုန်ကန်ယေဘုယျဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဝါရောင်အဖျားခြင်းဖြင့်ပြုန်းပြင်သစ်တပ်တွေ, လက်နက်ချခဲ့သည်။
•ယင်း 1er ဇန်နဝါရီလ 1804, လွတ်လပ်ရေးကိုကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ Dessalines သမ္မတရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းနှင့်ကျွန်းဟေတီ၏၎င်း၏ရှေးဟောင်းအမည်အားပေးသည်ခဲ့သည်။ qu'affranchie မျှမြေယာရှိပါတယ်ပေမယ့်လူဦးရေရဲ့အများစု, အနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကတိုင်းရင်းသားထောက်ခံမှုနှင့်လူမှုရေးအထောက်အပံ့ကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူမတည်ငြိမ်မှုများနှင့်ပြိုင်ဆိုင်မှု၏ရှည်လျားသောကာလရှိပါတယ်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
၁၈၂၅ ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်သည်ဟေတီနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်“ စိန့်ဒိုမင်ဂူ၏ပြင်သစ်ဒေသရှိနေထိုင်သူများသည်လျော်ကြေးပေးရန်တောင်းဆိုသူကိုလိုနီဟောင်းများအားလျော်ကြေးပေးရန်ရည်ရွယ်သည့်ရန်ပုံငွေသန်းသန်း ၁၅၀ ကိုပေးဆောင်သည့်အခြေအနေတွင်” (1825ပြီ ၁၇ ရက်အမိန့်) 150) ချားလ်စ် X ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဒီအမိန့်ကိုကာရစ်ဘီယံသို့စစ်သင်္ဘော ၁၄ စင်းတင်ပို့ခြင်းနှင့်အတူဟေတီသမ္မတ Jean-Pierre Boyer ကိုလက်ခံခိုင်းသည်။ ဤလျော်ကြေးသည်နှစ် ၂၀ အတွင်းပြည်တွင်းပinternalိပက္ခများကြောင့်ပျက်စီးခဲ့သောလူငယ်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ကြီးမားသော ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်သည်။ ၁၈၃၈ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်လူးဝစ် - ဖိလစ်နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော“ ချစ်ကြည်ရေးသဘောတူစာချုပ်” အရဂျင်နစ်ပြည်နယ်အတွက်ဘတ်ဂျက်ငွေ ၆ နှစ်ရငွေ (သန်း ၆၀) အထိလျှော့ချလိမ့်မည်။ ကျွန်း၏အရှေ့ပိုင်းသည်စပိန်ကိုလိုနီဟောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးယခင်ပြင်သစ်ကိုလိုနီများထံမှပေးသောလျော်ကြေးငွေကိုမပေးချေဘဲ ၁၈၄၄ တွင်ခွဲထွက်ခဲ့ပြီးယခင် ၁၇၇၆ နယ်နိမိတ်ကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။
Caisse des Depot et ပစ္စည်းအဟောင်းလက်ခံ, အများပြည်သူဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းပြင်သစ်ပြည်နယ်ကိုယ်စားဟေတီရန်မေတ္တာရပ်ခံလျော်ကြေးငွေများပေးချေမှုစုဆောင်းရန်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ဖို့, အီကလူ 1946 သည်အထိချေးရတယ်။
ထိုအချိန်မှ စ၍ ဟီတီလူမျိုးများသည်ယခုအခွန်ငွေကိုဒေါ်လာ ၂၁ ဘီလျံဖြင့်ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်တောင်းဆိုနေကြသည်။ လူးဝစ် - ဂျော့ဇ်တင်ကအလေးအနက်ပြောကြားသည်မှာ -“ သမိုင်းတွင်ထူးခြားသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုအရလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသူများအားလျော်ကြေးပေးရန်ကျွန်စနစ်၏သားကောင်များသာဖြစ်သည်။ ဤကြွေးမြီများပေးဆပ်ပြီးနောက်ဟေတီသည်အကြွေးတင်မှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့်မတည်ငြိမ်မှုများအောက်သို့ကျဆင်းသွားသည်။6] ။ "
ဤအကြောင်းကြောင့် CRAN သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မေလ ၁၀ ရက်တွင် CDC ကိုတိုင်တန်းခဲ့သဖြင့်ကျွန်စနစ်ကြောင့် ၁၉ ရာစု၌ကြွယ်ဝချမ်းသာလာသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ် CRAN မှ အကယ်၍ ဤအဖွဲ့အစည်းသည်ရန်ပုံငွေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို Santo Domingo ကိုစိုက်ပျိုးသူများအားပြန်လည်ဝေငှပါက၎င်းတို့အနက်မှများစွာသောလျော်ကြေးများမရရှိနိုင်တော့ဘဲငွေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ CRAN ၏စွပ်စွဲချက်များမှာ -“ ပထမအချက်အနေဖြင့်ဟေတီသားကောင်များအတွက်လျော်ကြေးရန်ပုံငွေသို့ပေးအပ်သင့်သည့်ပစ္စည်းပျက်စီးမှုနှင့်လျော်ကြေးပမာဏကိုအကဲဖြတ်ရန်တရား ၀ င်ကျွမ်းကျင်မှုကိုတောင်းဆိုပါ။ ကျွန်ပြုမှုဆိုင်ရာသုတေသနကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်ရန်ပုံငွေအတွက်အနည်းဆုံးယူရို ၁၀ သန်းထည့်ဝင်ရန် "ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် - CDC ကိုမေးပါ"7]” ။
ဟေတီကြွေးမြီအကြောင်း*] ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် Guyana မှပါလီမန်အမတ် Christiane Taubira သည်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီး Dominique de Villepin သို့စာဖြင့်ရေးသားခဲ့သည်။8] ။ သူမသည်ပြင်သစ်ဟေတီသမ္မတနိုင်ငံနှစ်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် ၁၈၃၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီး“ အခွန်ငွေကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဟာတီပြည်နယ်ဘတ်ဂျက်မှရငွေသည်အကဲဖြတ်မှုအတွက်အခြေခံဖြစ်နိုင်သည်။ ဤပြန်လည်ပေးအပ်သည့်လုပ်ရပ်သည်ဟေတီနိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဒေသပတ်ဝန်းကျင်၌တွန်းအားအသစ်တစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်သင့်သည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်ဟေတီနိုင်ငံ၌ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအမိန့်အာဏာပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါ (ပြင်သစ်) သည်ဤတိုင်းပြည်သို့အကူအညီ ၈၃ သန်းကူညီခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ရလဒ်အနည်းငယ်ကိုသာဖော်ပြခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏။ အုပ်ချုပ်မှုညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးယိုယွင်းမှုတို့ကြောင့်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသောကြီးမားသောနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေ၌ဟေတီအစိုးရနှင့်အမှန်တကယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအထူးခက်ခဲစေသည်။
 ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ရည်ညွှန်းသောအခါကျွန်မှဆင်းသက်လာသူများကိုငွေရေးကြေးရေးအတွက်ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်စဉ်းစားသည်။ အမှန်တကယ်တွင် CRAN ၏တောင်းဆိုချက်သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီးတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်စုပေါင်း၊
CRAN အနေဖြင့်တစ် ဦး ချင်းဘဏ္financialာရေးပြန်လည်လျော်ကြေးတောင်းခံခြင်းကိုတောင်းဆိုရန်ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်တရားမျှတသည်ဟုယူဆသည်။ ထို့အပြင်သူသည်ကျေးကျွန်၏သားများနှင့်သမီးများအားတိုင်ကြားချက်တစ်ခုပေးရန်နှင့် Rosita Destival အတွက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဇန်န ၀ ါရီလတွင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်တစ် ဦး ချင်းတောင်းဆိုမှုများကိုထောက်ခံရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ဘဝမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည်မှာသူသည် ၁၈၃၇ ခုနှစ်၏ကျွန်ဘိုးဘေးများမှလွတ်မြောက်ခြင်းလက်မှတ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။10].
ဘယ်သူပြုပြင်မလဲ။ - ကျွန်စနစ်နှင့်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ပိုမိုချမ်းသာသောကုမ္ပဏီများနှင့် / သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံများသို့။ ဖြေရှင်းချက်နှစ်ခုလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းပြင်သစ်တွင်ကျွန်စနစ်မှမည်သည့်ကုမ္ပဏီများအကျိုးခံစားခဲ့ရသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပြင်သစ်ဆိပ်ကမ်းများဖြစ်သော Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Le Havre …တို့သည်တြိဂံကုန်သွယ်မှုတွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်ခဲ့သည်ကိုကောင်းစွာတွေ့ရှိရသည်။11] (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြည့်ရှုပါ) နှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ကုမ္ပဏီများလူသိများကြသည်။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ကုန်သွယ်ရေးဥပဒေရေးရာနှင့်တစ်ဦး "ဂုဏ်အသရေ" ကုန်သွယ်ရေးဆင်ခြင်၏။ ဒါဟာ (အောက်တွင်စားပွဲပေါ်မှာကြည့်ပါ) မျှမျှတတတိကျစွာတင်ပို့ရောင်းချမှုများ၏အရေအတွက်တည်ထောင်ရန်နှင့်အလုပ်သမားကျေးကျွန်၏နံပါတ်အကဲဖြတ်ရန်, ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းစွာစောင့်ဘဲစီးပွားဖြစ်မှတ်ပုံတင်, ဖြစ်နိုင်ကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ခဲ့သည်။
လူးဝစ် - ဂျော့ဇ်တင်ကထောက်ပြသည် -“ တရားခံတွေဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာသေဆုံးသွားပြီးအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးရိုးလိုက်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုနဲ့ကျွန်စနစ်ကနေရရှိတဲ့အမြတ်တွေကမသေဘူး။ သူတို့ကဂရုတစိုက်စုဝေးကြီးပွားပြီ။ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်သောဤရာဇ ၀ တ်မှုမှအကျိုးအမြတ်ခံစားခဲ့ရသောပြင်သစ်တွင်ကုမ္ပဏီများရှိနေသေးသည်။ ကျွန်စနစ်မှအကျိုးအမြတ်ခံစားခဲ့ရသောကုမ္ပဏီများသည်ပြုပြင်မှုများအတွက်သူတို့၏လည်ပတ်ငွေကြေး၏ ၁% ကိုပေးချေရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အခြေခံအုတ်မြစ်သို့ပေးအပ်သောဤရန်ပုံငွေများသည်ကျေးကျွန်များ၏သားစဉ်မြေးဆက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ လူမှုရေးနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုမြှုပ်နှံသွားမည်ဖြစ်သည်။4].
ပြုပြင် စိတ်ဓာတ် LG Tin မှပြောကြားခဲ့သည်မှာနောင်တဟုမဆိုလိုပါ စိတ်ဓာတ် နှင့်ဘာသာရေး။ ဥပဒေရေးရာနှင့်နိုင်ငံရေးအရတန်ဖိုးရှိသောလျော်ကြေးငွေများကိုတောင်းခံသည်။2] ။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်AiméCésaireပြောခဲ့သည့်အတိုင်း -“ ငါစီးပွားဖြစ်အသုံးအနှုန်းတွေထက်စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရစဉ်းစားချင်တယ်။ "AiméCésaireသည်ပြုပြင်ရေးကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတို့ကိုသူတို့၏စာရင်းအင်းရှုထောင့်မှလျှော့ချခြင်းကိုမမြင်တွေ့လိုပါ။ " ဒါဟာ irreparable ဖြစ်ပါတယ် "။ လျော်ကြေးပေးခြင်းကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုမပျောက်စေနိုင်ပါ။ “ အနောက်နိုင်ငံတွေဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်ရမယ်၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုပြန်လည်မွေးဖွားလာအောင်ကူညီရမယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကူအညီဖြစ်သော်လည်းပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်မှတ်စုတစ်ခုရှိကြောင်းမယုံကြည်ပါ။12].
တောင်အတ္တလန္တိတ်၌ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုကို“ ဖြောင့်မတ်ခြင်း” ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘရာဇီး - အနောက်အာဖရိက - ဘရာဇီး၊ မြောက်အတ္တလန္တိတ်တွင်ဥရောပကျွန်ကုန်သွယ်မှုသည်တြိဂံကုန်သွယ်မှုပုံစံ - ဥရောပ၊ အနောက်၊ မြောက်အမေရိကနှင့်အမေရိကအလယ်ပိုင်း၊ ဥရောပ။
ကုန်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်လာသောသင်္ဘောများသည်ဥရောပဆိပ်ကမ်းများမှအနောက်အာဖရိကမှထွက်ခွာပြီးထိုကုန်ပစ္စည်းများကိုကျွန်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမကြာခဏပြောခဲ့သည့်အရာနှင့်ဆန့်ကျင်။ အာဖရိကကျေးကျွန်များ၏ရောင်းသူများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များကို“ အမှိုက်” ဖြင့်မဟုတ်ဘဲကုန်သွယ်မှု၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှစ် ဦး ကတန်ဖိုးထားသည့်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သောပိတ်ထည်များဖြစ်သည်။ (၅၀%)၊ သေနတ်၊ အရက်၊ ဆေးရွက်ကြီး၊
၂ •ကျွန်များကိုလူမဆန်သောအခြေအနေများအောက်တွင်ကျွန်သင်္ဘောများပေါ်တွင်အမေရိကန်နှင့်ဥရောပကိုလိုနီများနှင့်တောင်အမေရိကရှိသူတို့ကိုကျွန်စျေးကွက်များ၌ရောင်းစားခဲ့သည်။ ယနေ့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဥရောပကျွန်သင်္ဘောပေါ်ရှိအာဖရိကသားအရေအတွက်သည် ၁၂ သန်းမှ ၁၃ သန်းကြားရှိသည်။ အာဖရိက၌ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းသောကျွန်များထဲမှလူငယ်များနှင့်ကျန်းမာသူများကိုသာ ၀ ယ်ခဲ့သည်ဟုလူသိများသောကြောင့်လူကုန်ကူးခံရသူအရေအတွက်သည်ဘုတ်ပေါ်မှဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်၏ ၄ ဆမှ ၅ ဆအထိရှိသည်။ အစားအစာနှင့်သန့်ရှင်းရေး၊ ရောဂါ၊ ကုသမှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေမှုတို့ကြောင့် transatlantic ရေကြောင်းခရီးစဉ်၏ ၃ လတာကာလအတွင်းသိသိသာသာသေဆုံးမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ခရီးစဉ်အတွင်းသေဆုံးမှုနှုန်းမှာ ၁၅% ခန့်ရှိသည်။
၃ •ကျွန်ရောင်းရငွေမှရရှိသောအမြတ်အစွန်းသည်စိုက်ခင်းများမှထုတ်လုပ်သောအစားအစာများဖြစ်သောသကြား၊ ဆေးရွက်ကြီး၊ ရမ်၊ ကော်ဖီတို့ကိုဥရောပဆိပ်ကမ်းများသို့ပြန်ပို့ပြီးရောင်းချခဲ့သည်။
ကိုယ်ကျင့်တရားပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသည်အမှန်အားဖြင့်အောက်မေ့ဖွယ်အမှတ်ရခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပြင်သစ်တွင်ကျွန်ပြတိုက်ကို ၂၀၀၇ သြဂုတ်လကတည်းကလီဗာပူးလ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြတိုက်) ။ လတ်တလောတွင်ကျွန်စနစ်၏မှတ်ဉာဏ်ကိုရည်ညွှန်းသည့်နေရာအနည်းငယ်မှာ - Nantes တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောကျွန်စနစ်ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်အထိမ်းအမှတ် (ဓာတ်ပုံဆန့်ကျင်ဘက်)၊ Cap 2007 အထိမ်းအမှတ်အမှတ်တရ, Martinique ရှိ Anse Caffard, အောက်မေ့ဖွယ် Petit-Canal မှ La Guadeloupe နှင့်အချို့သောအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်များ။ ထို့ကြောင့်မေလ ၂၃ ရက်နေ့တွင်ကျွန်ဘဝမှသားကောင်များကိုအမှတ်ရစေသည့်နေ့တွင်ကျွန်စနစ်၏သားကောင်များကိုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အထိမ်းအမှတ် ၂ ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ Sarcelles တွင် ၉၅ ခု၊ -Denis (2012)
point-à-Pitre, Guadeloupe စီရင်စု, သတိရအောက်မေ့အက်ဥပဒေ (လူကုန်ကူးမှုနှင့်ကျွန်စနစ်၏စကားရပ်နှင့်မှတ်ဉာဏ်၏ကာရစ်ဘီယံစင်တာ) အဟောင်းသကြားအိမ်ခြံမြေများ၏ site ပေါ်တွင်တည်ဆောက်သင့်ပါတယ်လျက်ရှိသည်မှာ အဆုံး 2014- 2015 စတင်အားဖြင့်ပြီးစီးလိမ့်မည်။ ပြည်ပနယ်မြေများ၏ဝန်ကြီးဗစ် Lurel ကထောက်ခံဤသည်ရည်မှန်းချက်ကြီးစီမံကိန်းကိုသည်, မှတ်ဉာဏ်, သတင်းအချက်အလက်, အသိပညာနှင့်လူကုန်ကူးမှုနှင့်ကျွန်စနစ်အပေါ်သမိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနမှဆက်ကပ်အပ်နှံတဲ့ကျယ်ပြန့်ရှုပ်ထွေးမှုသင့်ပါတယ်။
ထို့အပြင်၊ ကျွန်တော်မှတ်ဉာဏ်နှင့်သမိုင်းရာဇ ၀ င်ကော်မတီ (CPMHE) ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Taubira ဥပဒေကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ၎င်း၏သမ္မတကို ၀ န်ကြီးချုပ်ကခန့်အပ်သည်။ "ကျွန်ပ်ကုန်သွယ်ရေး၊ ကျွန်စနစ်နှင့်၎င်းတို့အားဖျက်သိမ်းခြင်းတို့၏သမိုင်းနှင့်အမှတ်တရများအားသုတေသန၊ သင်ကြားခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများအတွက်အစိုးရအနေဖြင့် CPMHE သည်အကြံပေးအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ " 
၂၀၁၂ အောက်တိုဘာလတွင် ၀ န်ကြီးချုပ်အားပေးအပ်သောစာ၌ CRAN မှအခြားကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာလျော်ကြေးပေးခြင်းများကိုအကြံပြုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် -“ ကိုလိုနီခေတ်နှင့်ကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလဖြစ်ရပ်မှန်များကိုပိုမိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အတွက်ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်” ကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလနှင့်ကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလပြonနာများကိုလေ့လာခြင်းနှင့်သုတေသနပြုခြင်းများကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ “ ယခင်ကိုလိုနီများမှပြည်သူတို့ခံစားခဲ့ရသောခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်ရဲ၊ တရားရေးနှင့်စစ်တပ်အတွက်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များချမှတ်ခဲ့သည်” လူသတ်သမားများ၏အမည်များပါသောနေရာများနှင့်အဆောက်အအုံများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်မြို့များကိုဖိတ်ခေါ်ပါ။ ”
CRAN အတွက်“ ပြည်ပဌာနများနှင့်နယ်မြေများတွင်စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည်နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေများကိုမျှဝေရန်ရည်ရွယ်သည်” ဟုယူဆနိုင်သည်။
ဤအကြံပြုချက်နှင့်အညီတရားရေးဝန်ကြီး Christiane Taubira သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မေလ ၁၂ ရက်တွင်ဂျာနယ် du dimanche နှင့်အင်တာဗျူးတွင်ကြေငြာခဲ့သည်။15] ပြင်သစ်ပြည်ပရှိဌာနများနှင့်နယ်မြေများရှိကျေးကျွန်များ၏သားစဉ်မြေးဆက်များ၏မြေယာမူဝါဒကိုထောက်ခံပါ။ “ ပင်လယ်ရပ်ခြားနယ်မြေများတွင်မြေယာသိမ်းဆည်းမှုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာယေဘုယျအားဖြင့်ကျေးကျွန်များ၏သားစဉ်မြေးဆက်များသည်မြေယာအနည်းငယ်သာရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ပြည်တွင်းစစ်၊ မြေယာစုစည်းခြင်း၊ မြေယာမူဝါဒများမဖွင့်ဘဲကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ မြေယာများ ၀ ယ်ယူခြင်းတွင်အများပြည်သူ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလင်းစွာရှင်းပြပြီး၊ ဂိုင်ယာနာတွင်ပြည်နယ်သည်မြေယာကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်လွယ်ကူလိမ့်မည်။ အနောက်အင်ဒီးစ်တွင်မြေယာကိုသိမ်းဆည်းထားသည့်“ သခင်” ၏သားစဉ်မြေးဆက်များအထက်တွင်ရှိပြီးအကောင်အထည်ဖော်ရန် ပို၍ ခက်ခဲလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
Louis-Georges Tin က“ ပြင်သစ်ပင်လယ်ရပ်ခြားပိုင်နက်များအတွက်စစ်မှန်သောမာရှယ်အစီအစဉ်ကိုချမှတ်ရန်လိုအပ်သည်” ဟုစီးပွားရေးညွှန်းကိန်းများသည်အမြန်ဆုံးပြင်သစ်ရှိလူများအဆင့်သို့ရောက်ရှိရန်စဉ်းစားသည်။ ကိုလိုနီခေတ်မှအစဉ်အဆက်ရခဲ့သောစိုက်ခင်းများတွင်အဆိပ်သင့်စေသောစိုက်ပျိုးရေးအလေ့အကျင့်များကိုလည်းအဆုံးသတ်သင့်သည်။2].
ထို့ကြောင့်လျော်ကြေးငွေများအတွက်ဝယ်လိုအားဝေးတစ်ဦးချင်းစီဘဏ္ဍာရေးလျော်ကြေးငွေထက်ကျော်လွန်သွားပုံရသည်။ ဒါဟာကျွန်လူဦးရေ, လူမှုရေး, စီးပွားရေးနှင့်ပင်လယ်ရပ်ခြားနယ်မြေ၏ဝိသေသလက္ခဏာသားစဉ်မြေးဆက်မှမလုပ်ပဲတကယ်ပေါင်းစပ်။
CRAN ၎င်း၏တက်ကြွစစ်သွေးကြွမှတဆင့်ကျွန်ပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပြုပြင်ရေးများအတွက်တောင်းဆိုမှုကို၏ဦးဆောငျရနျအဖြစ်နေရာယူထားသည်။ မိမိအ action ကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံကမီးပွားချရန်ရလဒ်အဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တချို့အသံ express ကိုကြားသိခဲ့ကြသော်လည်းဒီမေလ 2013 မီ, ကျွန်ပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပြုပြင်ရေးမကြာခဏဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့ဘယ်တော့မှမ အဆိုပါ CRAN ကနေအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောရူပါရုံကို။
Myriam Cottias အတွက်16], ကျွန်တော်မှတ်ဉာဏ်နှင့်သမိုင်းကော်မတီ (CNMHE) မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မေလ ၁၀ ရက်မှ စ၍ သမိုင်းပညာရှင်နှင့်သမ္မတ -“ လျော်ကြေးငွေပေးရန်မေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်နားလည်သည်၊ သို့သော်ရှယ်ယာများမှာမူလုပ်ရန်များစွာရှိသည်။ ကျွန်စနစ်မှလူများ၏လူမျိုးရေး၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်း။ အဲဒါဟာလူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြmuchနာကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်”7].
၂၀၁၂ ခုနှစ်၌ Reunion ကျွန်းမှနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်နှင့် CNMHE ၏ဥက္ကFran္ဌဟောင်းFrançoiseVergèsကသံသယများကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် -“ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသည်အများပြည်သူဆိုင်ရာမူဝါဒများဖြစ်သောသုတေသနအစီအစဉ်များ၊ ပညာရေး၊ ကျောင်းစာအုပ်များ၊ စင်တာများကိုလက်ခံခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ ထိခိုက်နစ်နာသူများကိုဂရုပြုခြင်း၊17].
ဆူနယ်ဖူမာအတွက်ရီယွန်နီမှသမိုင်းပညာရှင်က“ ကျွန်တွေရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်အားလုံးကိုဘယ်တော့မှလျော်ကြေးမပေးနိုင်လို့ရုပ်ပစ္စည်းနဲ့ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စကငါ့အတွက်ဒုတိယပဲ။ ငါသည်လည်း၎င်းသည်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုထင်ပြီးလူတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ပြောဆိုသည်။ ငါ့ဘိုးဘေးများ၏ဆင်းရဲဒုက္ခကိုငါတို့ဘယ်တော့မှမရွေးတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံတော်အဆင့်တွင်ပြုပြင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာလူကြိုက်များသောပညာရေးအဆင့်တွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဗဟုသုတ၊ ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုကိုအလေးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတိတ်ကာလကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ဘိုးဘေးများအားသူတို့၏သမိုင်းကြောင်းကိုရေးသားခြင်းအားဖြင့်မေ့ထားကြောင်းသတိရခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပြုပြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် စိတ်ဓာတ်... အထူးသဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားအသင်းအဖွဲ့များအတွက် CRAN ကိုကျွန်ုပ်မစီရင်ပါ။ အထူးသဖြင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ သူတို့ခံစားနေရသော ၀ မ်းနည်းမှုနှင့်စိတ်ပျက်စရာများကြောင့်သူတို့လုပ်ပေးနေသည့်လျော်ကြေးကိုနားလည်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကအသိပညာကိုမြှင့်တင်ပေးတယ်။18].
အဘယ်သူမျှမကငျြ့ဝတျလျော်ကြေးများအတွက်တောင်းဆိုမှုများကိုမှလျောက်ပတ်စွာဆန့်ကျင်နိုင်, ဒါကြောင့်မကြာခဏသက်သေပြရန်အတွက်အခက်အခဲအလေးပေးဘဏ္ဍာရေးလျော်ကြေးငွေဆန့်ကျင်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူသည်, သင့်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းများအသုံးပြုပုံတကယ်ကျွန်ခံရာမှဆငျးသကျခံရ ။
ထို့ကြောင့်François Hollande သည်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှု၊ ကျွန်စနစ်နှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့၏အမှတ်တရများနေ့အထိမ်းအမှတ်အတွင်းမေလ ၁၀ ရက်တွင်သူ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၌ကျွန်စနစ်ကိစ္စရပ်များတွင်မှတ်ဉာဏ်၏တာဝန်ကိုအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မှတ်ဉာဏ်ထံအပ်နှံထားသောဆိုဒ်များ။ သို့သော်သူသည်ဘဏ္repာရေးလျော်ကြေးငွေများနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုးမြင်တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီး၊ မဖြစ်နိုင်သည့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုနှိုးဆွပြီး“ သမိုင်းသည်မဖျက်နိုင်ကြောင်း” ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စာရင်းတစ်ခု၏အဆုံးမှာအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏ဘာသာရပ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုကတော့မှတ်ဉာဏ်၊ 
တကယ်တော့ပြုပြင်အကြား, ဒီဂုဏ်ထူး စိတ်ဓာတ် ယင်းကိုယ်ကျင့်တရားလျော်ကြေးငွေသုတေသနနှင့်ပညာရေးစီမံကိန်းများကိုအားပေးဖို့အထိမ်းအမှတတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်စေ, တစ်ဦးကုန်ကျစရိတ်ရှိသည်ကြောင့်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အလွန်အတု။ အလားတူပင်ဘဏ္ဍာရေးလျော်ကြေးငွေတန်ဖိုးစိတ်ဓာတ်  ။ သူ Francois Hollande ဟာပြည်နယ်သတိရအောက်မေ့ point-à-Pitre (ယခင်ကသာတိုင်းဒေသကြီး Guadeloupe ခြင်းဖြင့်ရန်ပုံငွေ) လုပျဆောငျဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ဒီမိန့်ခွန်းထဲမှာပြောကြသောအခါဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးပြုပြင်ရေးဖြစ်ပါသည် စိတ်ဓာတ် နှင့်ဘဏ္ဍာရေး။ ထိုသို့ပင်လယ်ရပ်ခြားသင်္ဘောသားကသူတို့သမိုင်းမှဆက်ကပ်အပ်နှံတဲ့နေရာရှိသည်အရေးကြီးသည်နေစဉ်ကပြတိုက်တစ်ခုကိုမြို့ပြ၏ဤအပိုငျးမှလူသိများစေရန်လိုအပ်သောထက်ပိုသည်အဘယ်မှာရှိပြင်သစ်အတွက်အစပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေကြောင့်ကံဆိုးခဲ့သည် ပြင်သစ်သမိုင်းလည်းနည်းနည်းသင်ပေးတယ်။
ကျွန်စနစ်နှင့်ဆက်နွှယ်သောလျော်ကြေးငွေများနှင့် ပတ်သက်၍ နိဂုံးချုပ်ပါ။
•ကျွန်စနစ်နှင့်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုသည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာဖြစ်သလော - ဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဘူး ကျွန်စနစ်ကိုအမြဲတမ်းတည်ရှိနေသူကိုဖြေကြားသူများအားကျွန်ရောင်းဝယ်မှုနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကျွန်စနစ်တို့တွင်ထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြန်ဖြေပါမည်။ အမှန်စင်စစ်၎င်းတို့သည်သမိုင်းဝင်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်သော်လည်း ၁၅ ရာစုနှင့် ၁၆ ရာစုအတွင်းဖြိုဖျက်ခဲ့သောအမေရိကန်အင်ဒီးယန်းများထက် ပိုမို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စျေးပေါသောလုပ်သားအင်အားရရှိရန်စီးပွားရေးအရအကြောင်းပြချက်ဖြင့်အေးခဲစွာဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
1685 ၏အနက်ရောင်ဥပဒေအရကျွန်များကို“ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း” အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်လူမျိုးရေးအဆင့်ဆင့်အပေါ် အခြေခံ၍ ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းအသွားအလာမှာ ပို၍ ပင်ရွံစရာကောင်းသည်။
•ပြင်ဆင်မှုကမှန်ပါသလား။ - ဟုတ်တယ်၊
•မည်သည့်ပုံစံဖြင့်နည်း။ - ဤတိုက်ပွဲ၏စစ်သွေးကြွများအနေဖြင့်ကျွန်များ၏သားစဉ်မြေးဆက်များသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏သရုပ်ပြရန်ဖြစ်နိုင်သောအခါတရားရုံးသို့သွားရန်သတ္တိရှိခြင်းသို့မဟုတ်စုပေါင်းသူများကိုငွေရေးကြေးရေးအတွက်လျော်ကြေးပေးခြင်းရှိမရှိရယူနိုင်သည်။ ပြင်သစ်အမျိုးသမီးကကျွန်စနစ်ကြောင့်ပိုချမ်းသာလာတယ်။
ကျွန်စနစ်ဒါမှမဟုတ်စီးတံတား Branly ပြတိုက်မှာဘာသာရပ်အပေါ်အနည်းဆုံးအမြဲတမ်းအရောင်းပြခန်းတစ်ခုပြတိုက်၏ဆောက်လုပ်ရေးဥပမာ, သိသာဖြစ်သင့်သည်။ ဒီဘာသာရပ်အပေါ်သုတေသနပြု၏မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
လူးဝစ် -Gorges Tin နှင့်လည်းနိဂုံးချုပ်မည်။ “ ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်တောင်းဆိုမှုသည်လူမှုရေးမုန်းတီးမှုကိုအားဖြည့်ရန်မရည်ရွယ်ပါ။ ပြည်ပဌာနများ၌ဤမေးခွန်းများသည်အမျက်ဒေါသထွက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဖျက်သိမ်းပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း ၁၆၀ ကျော်အကြာတွင်အခြေအနေသည်အလွန်တင်းမာနေဆဲဖြစ်သည်။ မတရားမှုခံစားမှုသည်ပြင်းထန်သည်၊ ကိုလိုနီနယ်မြေ၊ လူမျိုးရေးလွှမ်းမိုးမှုနှင့် သူတို့ရဲ့ဆိုးကျိုးများပေါင်းစပ်ပြီးစီးပွားရေးလွှမ်းမိုးမှုကို။ ပြုပြင်ခြင်း၏ယုတ္တိဗေဒအားနေရာချထားခြင်းကဤသမိုင်းဝင်အငြင်းပွားမှုထိပ်ဆုံးမှထွက်ပေါ်လာစေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အဆင့်သုံးဆင့်ပါ ၀ င်သည်။ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး။ ကျွန်စနစ်ကိုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို Taubira ဥပဒေဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။ စစ်မှန်တဲ့ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး၊ အန္တိမရည်မှန်းချက်ကိုစစ်မှန်တဲ့နစ်နာမှုမရှိဘဲနဲ့မရနိုင်ဘူး”2].
 ကျွန်အဖြစ်လျော်ကြေးငွေ, မနေ့က၏သော့ချက်ကျမ်းများနှင့်ယနေ့ မှစ. ။ စာသားများလူးဝစ်-ဇော့တင်စုဆောင်းပေးအပ်သည်။ Ed က။ က Les အသနားခံစာ Matins ။ 2013
 ကျွန်နှင့်လျော်ကြေး။ သမိုင်း၏ရာဇဝတ်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကဘယ်လို ...
လူးဝစ်-ဇော့တင်။ Ed က။ စတော့အိတ် 2013 ။
 လူးဝစ်-ဇော့တင် Orleans တွင်တက္ကသိုလ်မှကထိကဖြစ်ပါသည်
 ၂၀၁၃ ခုနှစ်မတ်လ ၂၁ ရက်တွင် (CRAN ၏ဥက္ကLouis္ဌ Louis-Georges Tin) သည် (Quai Branly ပြတိုက်) ကွန်ဖရင့်၌“ ကျွန်စနစ်နှင့်ပတ်သက်သောပြုပြင်မှုများ” ၏အကြောင်းရင်းများကို (လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့) တွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ဤညီလာခံကိုပြတိုက်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်နားထောင်နိုင်သည်။ www.quaibranly.fr - လူကြိုက်များသော Quai Branly တက္ကသိုလ် - ကျွန်စနစ်၏သမိုင်း။
[5ဟေတီ၏] သမိုင်း (Hispaniola) ဥရောပတိုက်သားများရောက်ရှိလာကတည်းက။http://www.cosmovisions.com/ChronoH…
 ကျွန်စနစ်နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း - CRAN သည်အမှုကိုတရားရုံးသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ မိုက်ကယ် Hajdenberg ။
[*] ဟေတီ၏ဇာတ်လမ်း "အထူးသပြီးစိတ်ပျက်" ပြီးသားဒီတိုင်းပြည်အပေါ်ချမှတ်ထားဒီ "ဆိုးတပါးကြွေးမြီ" အကြောင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ 1106, ဆိုဖီ Perchellet အတွက် (ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း 2010) ကဒီမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
[11ကျွန်ခံနေရာ] Atlas ။ စာချုပ်များကိုလိုနီလူ့အဖွဲ့အစည်း, ပစ္စုပ္ပန်မှရှေး၏ဖျက်သိမ်း။ Marcel Dorigny နှင့်ဘား Gainot ။ Ed က။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်။ Atlas / တှေ့မှတျတမျးငွေကောက်ခံ။ 2010
 Negro ငါဖြစ်၏, ငါသည် negro ရှိနေပါဦးမည်။ Aime Cesaire ။ ဖရန်ကွိုက်စ Verge နှင့်အတူအင်တာဗျူးများ။ Ed က။ Albin မိုက်ကယ် 2005
[13ကျွန်ခံနေရာ] Atlas ။ စာချုပ်များကိုလိုနီလူ့အဖွဲ့အစည်း, ပစ္စုပ္ပန်မှရှေး၏ဖျက်သိမ်း။ Marcel Dorigny နှင့်ဘား Gainot ။ Ed က။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်။ Atlas / တှေ့မှတျတမျးငွေကောက်ခံ။ 2010
 ကျေးကျွန်၎င်းတို့၏မြေယာပြုလုပ်ခြင်း။ ဘားနတ် Bisson ။ http://www.lejdd.fr။ 11 မေလ 2013
 Myriam Cottias ယင်းအန်တီနှင့်ဂိုင်ယာနာတက္ကသိုလ်သုတေသန၏ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
 ကျွန်စနစ် - သွေး၊ ပျက်စီးခြင်း။ Michel Henry လွတ်မြောက်ခြင်း, မေလ 25, 2012 ။
[18ကျွန်ခံနေရာ] ပြုပြင်ခြင်းဘဏ္ဍာရေးပေမယ့်ကိုယ်ကျင့်တရားမဖွစျသငျ့သညျ။ Fuma Sudel ။http://www.zinfos974.com
[19ယင်းလူကုန်ကူးမှု၏မှတ်ဉာဏ်၏အမျိုးသားရေးနေ့၏အခါသမယ, ကျွန်ပြုမှုနှင့်၎င်းတို့၏ဖျက်သိမ်းအပေါ်သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်သမ္မတ၏] လိပ်စာ http://www.elysee.fr.
SOURCE မှ : http://www.economiedistributive.fr/Les-reparations-liees-a-l
€3ကနေ 24,00 အသစ်
4 25,00 €ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 24,00 ကိုဝယ်ပါ
2 12,70 €ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 5,00 ကိုဝယ်ပါ
ကျွန်နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း - သမိုင်းရာဇ ၀ တ်မှုများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း။
€5ကနေ 12,50 အသစ်
6 5,74 €ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 20,50 ကိုဝယ်ပါ
နောက်ဆုံးAprilပြီလ 11, 2021 ရက် 7:17 pm တွင်ရက်စွဲပါ
Shamanic Visions - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၂၀)
အာဖရိကဘိုးဘေးများမှ "ခရစ်ယာန်သူတော်စင်များ" အထိ